ဗိုင်းရပ်စ် ကာလအတွင်းမှာ ထောပတ်ပင်ကို လေ့ကျင့်ဖော်အဖြစ်ပြုလုပ်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန် – Burmese.asia
Homepage / News / ဗိုင်းရပ်စ် ကာလအတွင်းမှာ ထောပတ်ပင်ကို လေ့ကျင့်ဖော်အဖြစ်ပြုလုပ်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ဗိုင်းရပ်စ် ကာလအတွင်းမှာ ထောပတ်ပင်ကို လေ့ကျင့်ဖော်အဖြစ်ပြုလုပ်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
၂၀၂၀ ဧပြီလ ၁၈ ရက်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၇၁၀၂၇၂ ဦးရှိကာ သေဆုံးသူအရေအတွက်က ၃၇၁၇၅ ဦး အထိ ရှိပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ကလည်း မိသားစု ဝင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် နေအိမ်မှာပဲနေသလို လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလည်း နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တစ်ဦးတည်းလေ့ကျင့်နေရပေမယ့် လည်း ၎င်းက စိတ်ပျက်မနေဘဲ မိသားစုအတွက် အချိန်ပိုပေးဖြစ်သလို နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်လျက်ရှိပါတယ်။
Resorting to training with an avocado ? tree. He ? never complains, is tough and always there for me. #COVIDー19 #stayinghome pic.twitter.com/mdS90IPea4
— Aung LA Nsang (@AungLANsang) March 28, 2020
သူ့ ရဲ့ခြံဝင်းအတွင်းက သက်မဲ့ လေ့ကျင့်ဖော်ကတော့ ထောပတ်ပင်ဖြစ်ပြီး အကူလူတစ်ဦးက လေ့ကျင့်ပေးနေသလိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာပါပဲ။ အောင်လဟာ ထောပတ်ပင်စည်မှာ ၎င်းရဲ့အရပ်အမြင့်အလိုက် Pad နှစ်ခုနဲ့ ခါးပတ်တစ်ခုကို တိပ်နဲ့ပတ်ကာ လက်သီးထိုးချက်၊ ခြေကန်ချက်တွေ လေ့ ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Previous post အိမ်မှာပဲနေဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေမှာ လူစည်ကား
Next post မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ပြန်လည် ဝင်ရောက် လိုသူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ် (RELIEF FLIGHT) နဲ့ ခေါ်ဆောင်ပေးမယ်